ဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲ သုံးသပ်ချက် | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲ သုံးသပ်ချက်	Posted by mm thinker on September 12, 2009
Posted in: International Affairs, Politics.	Tagged: International Affairs, Politics.	1 Comment
ဂျပန်နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်က ဆာရိုနားရားဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် နှင့် လူရော၊ မူပါ ပြောင်းအောင်လုပ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ
မကြာသေးခင်ကပြီးဆုံးသွားသော ဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲသည် နိုင်ငံတကာမှ သတင်းစာဆရာများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ပညာရှင်တို့၏ စိတ်ကို အဖမ်းစားနိုင်ဆုံးဖြစ်သွားသည်။ အကြောင်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ (နှစ် ၅၀ခန့်) အာဏာကြီးထွားခဲ့သော လစ်ဘရယ်ဒီမို ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(LDP) မှာ အတိုက်အခံ ဂျပန်ဒီမို ကရက်တစ်ပါတီ (DPJ) အား ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးနိမ့်သွားသောကြောင့်ဖြစ် သည်။ ပြောရလျှင် ဤရွေးကောက်ပွဲက ဩဇာအာဏာကြီးမားလွန်းသော နိုင်ငံ ရေးပါတီကြီးတစ်ခုအား ကန်ထုတ်လိုက်ရုံတင်သာမက ဂျပန်နိုင်ငံရေးစနစ် တစ်ခုလုံးကို အမြစ်ကနေဆွဲလှန်လိုက်သလို ဖြစ်သွားစေသည်။ ဂျပန်စကားဖြင့် ရိုးရိုးလေးပြောပါက ဆာရိုနား ရား(နှုတ်ဆက်ပါသည်) LDP ၊ ကွန်နီချီးဝါး (မင်္ဂလာပါ) DPJ ဟုဆိုရပေမည်။
ဂျပန်ဟု ဆိုလိုက်လျှင် မာန်မာနနှင့် စိတ်ထားကြီးသော၊ ကတိတည်ပြီး အလုပ်မှအလုပ်ဖြစ်နေသော လူမျိုးများ နေထိုင်ရာနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်လူ သိများပါသည်။ စီးပွားရေးအရပြောလျှင်လည်း အာရှအင်အားကြီးများ စာရင်း၌ ထိပ်ဆုံးပိုင်းက ပါဝင်သူဖြစ်သည်။ ဤသို့ ထိပ်ပိတ် စာရင်းဝင်ရခြင်းမှာလည်း ၁၉၅၅ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ထူထောင်ခဲ့သော LDP ပါတီကြောင့်ဟု ဂျပန်မျိုး ဆက်အတော်များများက လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် LDP ပါတီမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဂျပန်နိုင်ငံရေး နှလုံးအိမ်ကို ဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းအလား သဘောထားကာ စိတ်ကြိုက်ကန်ခွင့်ရခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုဩဂုတ်လကုန်ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပိုင်းတွင် LDP တို့ ကြိုက်သလိုကန်ခွင့်ရတော့မည် မဟုတ်ပေ။ အနီကတ်ပြသူ၊ ဂိုးဖမ်းသူ ဂျပန်ပြည်သူများက LDP အ ပေါ် သူတို့မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ စိတ်ကုန်နေကြောင်း၊ ယုံကြည်မှုလျော့ နည်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းကို ထုတ်ပြလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြိုင်ဘက် DPJ မှာ ဂျပန် ပြည်သူများကချီးမြှင့်သောပန်းကုံးကြီးကို စွပ်ကာ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်သို့ ရင်ကော့ပြီးတက်ခွင့်ရလိုက်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နှင့် သတင်းများကို ဖတ်ရှုရသည်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံသားများ မဆိုထားနှင့်။ နိုင်ငံသား မဟုတ်သူများကိုပင် များစွာ အံ့အားသင့်စေပါလိမ့်မည်။ သေချာသည်မှာ ဤရွေးကောက်ပွဲသည် သာမန်မဟုတ်သော အပြောင်းအလဲကြီး တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေမည်ဟု ယုံကြည်ရပါသည်။ ယခုလို ယုံကြည်ရခြင်းအတွက်လည်း ခိုင်မာသောအကြောင်းပြချက် သုံးချက်ရှိသည်။ နံပါတ်-၁ အချက်မှာ DPJ ပါတီ၏ အောင်မြင်မှု အတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ DPJ က ဥပဒေပြုလွှတ်တော် အမတ်နေရာ ၄၈၀ ရှိသည့် တွင် ၃၀၈ နေရာအထိရရှိလိုက်သည်။ LDP ပါတီက ၁၁၉ နေရာသာ ရရှိသည်။ နံပါတ်-၂ အချက်မှာ LDP ပါတီ၏အခန်းကဏ္ဍယခုလို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်အဆုံးသတ်သွားမှုသည် ဂျပန် နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတွင် အပြောင်းအလဲကိစ္စများ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိသွား သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နံပါတ်-၃အချက်မှာ LDP ၏ ရှုံးနိမ့်မှုသည် ဂျပန်လူမျိုးများက ပါတီကိုသာမက နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပါ အိပ်သွန်ဖာမှောက်လုပ်စေလိုသည်ကို ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရေး လေ့လာသူများ၏အဆိုအရ ပြည်သူအများစုသည် LDP ပါတီကို ယခုနှစ်များအ တွင်း ယုံကြည်ချက်နည်းလာကြသည်။ အလုပ်အကိုင်ဖူလုံရေး၊ လူမှုဖူလူံရေး၊ ပင်စင်အစရှိသော ပြဿနာများကို LDP ပါတီကကောင်း စွာမဖြေရှင်းနိုင်ဟု လက်ခံကြသည်။ ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒကို LDP ပါတီအနေဖြင့်ဖြည့် ဆည်းပေးရန်ပျက်ကွက်ရခြင်းမှာ LDP သည် ပါတီ၊ ဗျူရိုကရေစီယန္တရား၊ ဘိဇနက်ကော်ပိုရိတ်များ အင်အားကြီးထွားနိုင်ရေးသာ အချိန်ပြည့် အာရုံစိုက်ခဲ့သောကြောင့်ဟု ဆိုသည်။ LDP ပါတီလက်ထက်တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ဘိဇနက်လုပ်ငန်းကြီး များအတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့သော ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကောင်းအချို့နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။ လယ်သမားများကို အစိုးရက စရိတ်စိုက်ထုတ်ပေးသည်။ ဤသို့သော နည်းဗျူဟာကို ထုတ်သုံးပြီး ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပြန်လည်ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရအောင် LDP ကလုပ် လေ့ရှိသည်။ သို့သော် ၁၉၈၀ပြည့်နှစ် နှောင်းပိုင်းသို့ ရောက်လာသောအခါ ဂျပန်စီးပွားရေးတိုးတက်မှု နှုန်းထားမှာ တစ်စထက်တစ်စ နှေးကွေးလာသည်။ ပြည်သူလူထုမှာ ဝင်ငွေနည်းသော အ လုပ်အကိုင်ဖြင့် ရောင့်ရဲတင့်တိမ်နိုင်မှု မရှိတော့ကြောင်း၊ အဆင့်အတန်းမြင့်မားသော လူမှုဘဝနှင့် အလုပ်အကိုင်များ ကို တောင့်တလာကြကြောင်း ဂျပန်နိုင် ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်များက သုံးသပ်ပါ သည်။
“ဂျပန်တွေက ဆရာဝန်တွေ၊ ပရဟိတ ဂေဟာကြီးတွေနဲ့ အသင်အပြကောင်းတဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေကို ပိုမက်မောလာကြတယ်။ တောမှာနေတဲ့သူက မြို့တက်ချင်လာကြတယ်။ အိမ်ရာကောင်ကောင်း ထူထောင်ချင်လာကြတယ်” ဟု တိုကျို တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါမောက္ခ ယာမာဂူချီကပြောသည်။ အစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးများသည် ဗျူရိုကရက်များနှင့် ပါတီထိပ်ပိုင်းအလွှာမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ရုပ်သေးများဖြစ်လာကာ အာဏာတည်တံ့ရေး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိရေးတို့ကိုသာ အာရုံ စိုက်လာကြကြောင်း ၄င်းကပြောပါ သည်။ ဤသို့သော အနေအထားမျိုးကို ဂျပန်လူမျိုးများဆက်၍ လက်သင့်မခံချင်ကြသောကြောင့် ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင် LDP မျက်နှာပန်းမသာတော့ခြင်း ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ LDP ထက် ပိုမိုပွင့်လင်းပြီး တာဝန်ယူတတ်သော အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီကို ရယူလိုခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ လေ့လာမှုစစ်တမ်းများအရ ဂျပန်နိုင်ငံသားများ DPJ ပါတီ အကြောင်းကို ဂဃနဏမသိသေးသော်လည်း LDP ပါတီဝင်များနှင့် မူဝါဒများကို စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့လာသောကြောင့် DPJ ကိုမဲပေးလိုကြခြင်းဖြစ်သည်။
သတင်းများအရ DPJ ခေါင်းဆောင် ယူကိုဟာတိုယားမားမှာ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တရားဝင်တာဝန်ယူရတော့မည်ဖြစ်သည်။ မစ္စတာ ဟာတိုယားမားအတွက် ဝန်ကြီး ချုပ်ဖြစ်သည့်အတွက် အောင်ပွဲခံနေချိန် ပင်ရမည်မဟုတ်။ ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်ဆန်း ပိုင်းလောက်ကတည်းက တအိအိကျဆင်းလာနေသော စီးပွားရေးကိုပြန်လည် ထောင်မတ်ရန် တာဝန်များကကြိုဆိုလျက်ရှိသည်။ ဟာတိုယားမားအနေဖြင့် ပထမဆုံးလုပ်ရမည့်အလုပ်မှာ အစိုးရ အဖွဲ့ကို အလုံးစုံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ပြီး ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့်လည်ပတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဗျူရိုကရေစီယန္တရားနှင့် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်ကိစ္စတို့က သူ၏ ထိပ်ပိတ်အာဂျင်တာများဖြစ်လာမည်။ မဲဆွဲပွဲကာလ အတွင်းပေးထားခဲ့သည့် ကတိများအတိုင်းဆိုပါက ဟာတိုယားမား၏ ကက်ဘိနက်သည် LDP လက်ထက်ကထက် ပို၍ဩဇာကြီးမားပြီး တာဝန်သိတတ်မှု ပိုများပေလိမ့်မည်။ DPJ ပါတီက အဂတိတရားကင်းပြီး ပြည်သူလူထုအပေါ် ကျိုးနွံသော ဗျူရိုကရက်များကို မွေးထုတ် မည်ဟူသော ကတိလည်းပေးထားသေးသည်။ လေ့လာအကဲခတ်သူများ အဆိုအရ DPJ အတွက် ငယ်ရွယ်ပြီးတက်ကြွသော နိုင်ငံရေးသမားများ လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ DPJ မှ ဗျူရိုကရက်များကို မည်သို့မည်ပုံ တက်ကြွအောင်လုပ်ပြီး စည်းဖောက်သူများကို မည်သို့ အပြစ်ပေး အရေးယူမည်ဟူသော အချက်က ဝန်ကြီးချုပ်သစ်၏ အရည်အချင်းကို မလွဲမသွေ ပြသပါလိမ့်မည်။ ကက်ဘိနက်အသစ် အတွက် အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးနှောက်မုန်တိုင်းထန်နိုင်သည့် အချိန်မှာ ယခုကာလမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ရှိအနေအထားတွင် ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး အသီးသီးက ၄င်းတို့၏ အသုံးစရိတ်ဘတ်ဂျက်အတွက် အစီရင်ခံစာများ တင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ DPJ ကဘတ်ဂျက်ကိစ္စကို အနစ်တကျပြန်လည်ရေးဆွဲပြီး ယခင် LDP ပါတီလက်ထက်က အား နည်းချက်များကို အားလုံးပြောင်းလဲမည် ဟုဆိုသည်။ ယခုအချိန်သည် DPJ ပါတီခေါင်းဆောင် ဟာတိုယားမားအတွက် ယခင်အစိုးရလက်ထက်က လုပ်ခွင့်မရလိုက်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုများကို ကောင်းစွာလုပ်ပြနိုင်မည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ သူ့အတွက်အဓိက လိုအပ်ချက်မှာ ညီညွတ်မျှတသောအုပ် ချုပ်မှုပညာသာဖြစ်သည်။
အဆုံးသတ်အားဖြင့်ခြုံပြောပါက ပြီးဆုံးသွားသော ရွေးကောက်ပွဲသည် ဂျပန်နိုင်ငံပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံရေးလောက အတွက် “ဂ”(ဂငယ်) ကွေ့တစ်ကွေ့ကိုဖော်ဆောင် ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ DPJ ၏ အောင်ပွဲကြောင့်နှစ်များစွာ သရဖူဆောင်းခဲ့သော LDP မှာ အတိုက်အခံဘဝဖြင့် ဆက်နေသွားရမည့် အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်သွားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ် သက်သော ယူဆချက်တစ်ချို့ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုသည်။ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အချို့က အုပ်ချုပ်သူ လူကို ပြောင်းလဲစေပြီး အုပ်ချုပ်သည့်မူဝါဒကို မပြောင်းလဲစေလိုကြပေ။ အချို့က မူဝါဒကို ပြောင်းလဲစေလိုသည်၊ သို့သော် အုပ်ချုပ်သူ လူကိုမူမပြောင်းလဲစေလိုပေ။ ယခု ဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူရော မူပါပြောင်းပစ်လိုက်သည့်ပွဲ ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါက လုံးဝမှားမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ လူရောမူပါပြောင်းလဲနိုင်အောင်လုပ်နိုင် သည့်အစွမ်းမှာ DPJ ရော၊ LDP တွင် ပါရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအစွမ်းသည် စနစ်ဟောင်း၊ အကျင့်ဟောင်းများကို ရိုးအီငြီးငွေ့နေသော ပြည်သူများတွင်သာ ရှိသည်ကို ဂျပန်နိုင်ငံသားများက ဖော်ကျူးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဆာရိုနား ရား LDP ။
← နိုင်ငံ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချောင်းဟန့်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ	+ – x ? →	One comment on “ဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲ သုံးသပ်ချက်”
Zaw Tun Aung on September 12, 2009 at 9:23 am said:
ဒါပေမဲ့ အကောင်းဘက်ပြောင်းမယ်လို့ အပြင်ကစောင့်ကြည့်သူတွေပြောပေမဲ့ ဂျပန်လူမျိုး(ဘက်လိုက်မှု့ ကင်း)တဲ့ သူတွေပြောနေတာက..အခုတက်မဲ့ မပါတီ(DPJ)Hatoyama San နဲ့ တခြားအနိူင်ရပါတီတွေက..တရုတ်ကြီးနဲ့ ရရှားယိမ်းတဲ့ သူတွေတဲ့ ..
ပါတယ်..စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ အနေအထားတွေ..နယ်ချဲ့ စိတ်ပြန်အသက်သွင်းတာတွေကိုရှံးခဲ့တဲ့ ပါတီကအနာဂါတ်မှာလုပ်လာနိူင်ခြေရှိတယ်လို့ ပြောနေကြတာကိုစဉ်းစားထားသင့်ကြောင်းပါ.. (ဖေ့စ်ဘုတ် ကော်မန့်မှ)